Ady amin’ny pesta Nahazo 33,5 miliara ariary i Madagasikara
Fahasalamam-bahoaka Tena mbola atahorana ny pesta
Ny fiandohan’ny volana aogositra 2017 no nahitana trangana valanaretina pesta voalohany ka nahafatesana olona 202 teto Madagasikara raha tsiahivina, ny isan’ireo namoy ny ainy tao anatin’ny 4 volana latsaka teo. Ny 27 novambra lasa teo kosa no nambara tamin’ny fomba ofisialy fa resy izy ity ho an’ireo tanàn-dehibe.
Homamiadan’ny vozon’ny tranonjaza 200 000 Ar ny saran’ny fitiliana
2 hetsy Ar ny saran’ny manao fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranonjaza eto amintsika, raha aloa vola. Izany indrindra no nanosika ny Fondation Akbaraly sy ny fikambanana Pachamama hanatanteraka ilay fitiliana maimaimpoana eny amin’ny fokontany Ambatoroka nanomboka omaly alatsinainy 12 martsa.
Fitsaboana aretina Afaka ampiasana tambazotran-pifandraisana
Omaly no nampahafantarina tetsy amin’ny Hotel Carlton Anosy ilay Tahiry iombonan’ny fitsimbinana ny fahasalaman’ny rehetra (CNSS).
Hopitaly Befelatanana Nahazo fitaovana fameloman’aina ho an’ny zazaHopitaly Befelatanana Nahazo fitaovana fameloman’aina ho an’ny zaza
Nahazo toeram-pitsaboana vaovao sy fameloman’aina ho an’ny zaza vao teraka ka hatramin’ny 15 taona, ny hopitaly Befelatanana. Omaly no nanokanana tamim-pomba ofisialy izany, izay vokatry ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana Malagasy sy ny vondrona Rasseta,
HOMI SOAVINANDRIANA 1.000 isan-taona ny zaza teraka ao, 300 tsy ampy lanja
Manodidina ny 1.000 isan-taona amin’izao ireo zaza teraka eo anivon’ny hopitalin’ny Miaramila etsy Soavinandriana (HOMI). Ny 300 amin’ireo dia teraka tsy tonga volana avokoa noho ny rarintsaina mahazo ireo renim-pianakaviana mitondra vohoka, ny havizanana diso tafahoatra…
Fanitarana CSB II Ambalavato Nahazo 225 tapitrisa Ar avy amin`ny Japoney
Novatsian`ny firenena Japoney 225 tapitrisa Ar ny tobim-pahasalamana fototra Ambalavato-Antsirabe mba ho fanitarana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ao an-toerana.
Nisy ny fivoriana manokana niarahan’ny fitondram-panjakana Malagasy notarihan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly an-kilany sy ny masoivoho vahiny omban’ireo fikambanna iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara an-daniny.
Nisy ny fivoriana manokana niarahan’ny fitondram-panjakana Malagasy notarihan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly an-kilany sy ny masoivoho vahiny omban’ireo fikambanna iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara an-daniny. Ady amin’ny pesta no votoatin-dresaka. Natao izao mba hanomezana ny vaovao marina sy mitombina ho an’ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara mba hampisinda ny ahiahy, hoy ny praiminisitra. 500 no mararin’ny pesta eto Madagasikara, hoy ny minisitry ny fahasalamana ny Pr Lalatiana Randriamanarivo ary 49 no maty, izay no tarehimarika ofisialy sy voamarina tsara. Nanambara kosa ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana fa ao anatin’ny « grade 2 » izany hoe ny sokajy faharoa no misy an’i Madagasikara amin’ity aretina pesta ity, midika izany fa mbola afaka mifanerasera tsara amin’ireo firenena hafa isika, hoy ny praiminisitra ary tsy misy ny tokony hatahorana satria mandeha ny asa sy ny ezaka rehetra amin’ny fifehezana ny valan’aretina. Mitohy ny fiaraha-miasa eo amin’ny OMS, ny Usaid Amerikanina sy ny BNGRC ary ny governemanta amin’ny ady ho famongorana ny pesta. Nanokana vola 9,5 tapitrisa dolara ny firenena mikambana ho amin’izany ary ho avy tsy ho ela eto Madagasikara ny manampahaizana manokana momba ny pesta 40 mianadahy izay nalefan’ny firenena mikambana. Efa nanolotra 1,5 tapitrisa dolara moa mialoha izao ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) mba hanampiana an’i Madagasikara amin’ny famongorana ny pesta.11 tapitrisa dolara na 33,5 miliara ariary izao ny vola azon’i Madagasikara mba hiadiana amin’ny pesta.